01 / 06 / 2021 01 / 07 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 978 Views စာ0မှတ်ချက် 10292 Friends Apartments, 10292 အဆိုပါ Friends Apartments, 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ, 76178 နေ့စဉ် Bugle, BrickHeadz, အပေးအယူ, DOTS, အခမဲ့, အခမဲ့လက်ဆောင်များ, အခမဲ့ LEGO, Friends, GWP, key ကိုကွင်းဆက်, Lego, Lego BrickHeadz, lego အပေးအယူ, Lego DOTS, Lego Friends, Lego GWP, Lego Marvel, Lego Ninjago, LEGO ကမ်းလှမ်းမှု, Lego Spider-Man, Lego စတိုး, Lego လွှဲသင်္ဘောစီးနင်း, Lego Vidiyo, Lego VIP, LEGO.com, Marvel, Ninjago, ကမ်းလှမ်းချက်များ, အွန်လိုင်းတရားဝင် LEGO ဆိုင်, Spider-Man, လွှဲသင်္ဘောစီး, ဗီဒီယို, VIP, vip အချက်များ, VIP ဆုများ
နွေရာသီရောက်ပြီ၊ များသောအားဖြင့်အားလပ်ရက်တွေဆိုပေမယ့်ဒီနှစ်မှာတော့အနည်းငယ်ကွဲပြားတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာ၊ အသစ်အဆန်းများများပြားနေသည် Lego အစုရှယ်ယာများရောင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်အခမဲ့လက်ဆောင်များကိုဇွန်လတွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်လက်ထားရှိမည်။
ဇန်နဝါရီလအပြင်ဇွန်လသည်ကျွန်ုပ်တို့ဆောက်လုပ်သူများအတွက်အကြီးမားဆုံးလများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ များပြားလှသောအကြောင်းအရာများနှင့်တည်ဆောက်ရန်အသစ်ထွက်ရှိသည့်စုံများနှင့်အတူ။ The Lego Group သည်ဤကြီးမားသောပစ်လွှတ်မှုကိုဆွဲဆောင်ရန်ကမ်းလှမ်းခြင်းများနှင့်လက်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းများဖြင့်ကူညီသည်။
ကျေးဇူးတင်စရာသင့်မှာကျွန်ုပ်တို့သိထားသင့်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ် Lego ဇွန်လတွင်ဤလက်စွဲလမ်းညွှန်တွင်ကမ်းလှမ်းချက်အသစ်များ၊ ဆိုက်ရောက်မှုအသစ်များနှင့်သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာများပါဝင်သည်။
၏နွေရာသီလှိုင်း Lego စုဆောင်းရန်၊ တည်ဆောက်ရန်၊ ပြရန်နှင့်ကစားရန်အဆင်သင့်အသစ်များပေါင်း ၉၀ ကျော်နှင့်အတူမော်ဒယ်များသည်အွန်လိုင်းစတိုးသို့ရောက်လာသည်။ ဘတ်ဂျက်တိုင်းနှင့်အကျိုးစီးပွားတိုင်းနှင့်ကိုက်ညီမည့်အရာရှိပါသည် မော်ကွန်းစူပါဟီးရိုး blockbusters အမှ အကြီးဆုံးအစဉ်အဆက် LEGO မော်ဒယ် 31203 ကမ္ဘာ့မြေပုံ။ အားလုံးအပေါ်ရက်စွဲအထိနေပါ အသစ်အစုံ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ မာစတာစာရင်း။ Stateside ပရိတ်သတ်တွေကအစုံအတွက်နည်းနည်းလေးပိုစောင့်ရမယ်။
76178 Daily Bugle ကျယ်ပြန့်လွှတ်ပေးရန်
အောက်ပါ အစောပိုင်းလွှတ်ပေးရန် VIP အသင်းဝင်များအတွက် 76178 နေ့စဉ် Bugle အားလုံးအဘို့အယခုရရှိနိုင်ပါသည် Marvel နိူင်ငံ။ ဒီကြီးမားတဲ့မော်ဒယ်များသည်အမြင့် ၈၂ စင်တီမီတာအထိရှည်လျားပြီး ၂၅ ခုအသေးစားပုံစံများပါ ၀ င်သည်။ အကြီးဆုံးအဖြစ် Lego Marvel ယနေ့အထိသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည် ကိုးကား ၏များစွာသောမီဒီယာ outings ရန် Spider-Man ပင်တစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့သည် အိပ်မက်မော်ဒယ် ၎င်း၏ဒီဇိုင်နာသည်။ အိုး, ငါတို့ဖော်ပြထားခြင်းကိုပြု၏ ကျီစား Daredevil minifigure လား။
10292 အဆိုပါ Friends Apartကျယ်ပြန့်လွှတ်ပေးရန် ments
နှင့်အတူအောင်မြင်သောပစ်လွှတ်ပြီးနောက် 21319 ဗဟို Perk, အ Lego အုပ်စုသည် ၀ ယ်လိုအားအသစ်ကိုရှာဖွေခဲ့သည် Lego Friendsမမျှမတ။ နာမည်ကျော် sitcom သည်၎င်း၏ဒုတိယရရှိခဲ့သည် Lego ပြပွဲအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှချစ်သူများမှယခုရရှိနိုင်သည့်အရာ။ နှစ်ခု AP နှင့်အတူartments, တစ်ပြခန်း အီစတာကြက်ဥ နှင့် ခုနစျပါး minifigures, Friends ပရိတ်သတ်တွေဟာအားရစရာအတွက်ဖြစ်ကြသည်။ သင်ပိုမိုရှာဖွေနိုင်ပါတယ် ပြန်လည်သုံးသပ်.
အခမဲ့ Friends ခွက်
ဤအလှဆင်ထားသောသောက်သုံးနိုင်သောကိရိယာ (ခွက်၊ ခွက်တစ်ခု) ကိုသီးသန့်ရရှိနိုင်သည် LEGO.com ၏ဝယ်ယူမှုနှင့်အတူ 21319 ဗဟို Perkမရ။ ဒါအသစ်ထွက်တာမဟုတ်ဘူး 10292 အဆိုပါ Friends Apartments အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဓိပ္ပာယ်သည်အလွန်အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော် ၂၀၁၉ မှစ၍ ရနိုင်သောမူရင်း sitcom-themed set ဖြစ်သည်။ သင်ယခုအချိန်ထိပိတ်ထားမည်ဆိုလျှင်သတင်းကောင်းဖြစ်သည်။ ဇွန်လ ၂၃ ရက် နောက်ဆုံးထား၍ အွန်လိုင်းမှမှာယူနိုင်ပါသည်။
အချို့သောဒေသများရှိဆောက်လုပ်သူများသည်ချစ်စရာကောင်းသောအရာကိုရှာဖွေနိုင်လိမ့်မည် Lego လကုန်အထိအခမဲ့လေ့ကျင့်ခန်း။ သင်ထံမှအစုံ၏£ 40 / $ 40 / € 40 တန်ဖိုးရှိဝယ်ယူသင့်ပါတယ် Friends, VIDIYO or DOTS ဇွန် ၃၀ မတိုင်မီတွင်မင်း၏တောင်းတွင်ထည့်ထားသောအခမဲ့ cube ကိုင်ဆောင်သူကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီအခင်းအကျင်းတစ်ခုစီမှာအစုံလိုက်အသစ်အစုံလိုက်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့အစုကိုရယူဖို့ရွေးချယ်ဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
အရင်က အာရှ - သီးသန့် ကမ်းလှမ်းချက်သည်ယခုလကမ္ဘာ့ကျန်နိုင်ငံများသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းဖြစ်သည် Lego လွှဲသင်္ဘောစီး မည်သည့်အမိန့်ဖြင့်မဆိုဒေါ်လာ ၈၅ ဒေါ်လာဖြင့်ဇွန် ၂၁ မှဇွန် ၃၀ အထိ VIP အသင်းဝင်များအတွက်သာဖြစ်သည်။ သင်မသေးသေးသေးသေးလျှင် ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စာရင်းသွင်းရန်ပိုမိုမက်လုံးများရှိလိမ့်မည် Lego စီးနင်းမည်သည့်အုတ် -built fairground နှင့်အတူကောင်းစွာတွဲပါလိမ့်မယ်။
များအတွက် 10 နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ Ninjago အဖြစ်ဇွန်လသို့ဆက်လက် သုံးလ အသစ်၏ Ninjago BrickHeadz ဒေါ်လာ ၈၅ ဒေါ်လာနှင့်ဇွန်လ ၃၀ အထိစုစုပေါင်းသောဆောင်ပုဒ်မှမည်သည့် ၀ ယ်ယူမှုကိုမဆို ၀ ယ်ယူမည် Lego အုပ်စုဖွဲ့မယ်၊art ကြောင်းစျေးနှုန်းတံခါးခုံကိုရောက်ရှိပြီးနောက် $ 10 အတူ။ ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုစတိုးဆိုင်များတွင်သာရနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်နှင့်၎င်းကိုရွေးချယ်ရန်စီစဉ်ပါကသင်၏ဒေသသို့သွားပါ အသစ်က NINJAGO အစုံ ထ။
အပြာရောင် Feeling လား VIP သော့ချိတ်ပါ
အဆိုပါ Lego VIP အစီအစဉ်သည်မကြာသေးမီကချို့ယွင်းချက်များရှိနေသော်လည်းမည်သည့်တည်ဆောက်သူအတွက်မဆိုတန်ဖိုးရှိသောပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ အစီအစဉ်တွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့ဝင်များကိုကူညီရန် Lego အခမဲ့ sign up လုပ်တဲ့သူတိုင်းကို Group မှအခမဲ့သော့ကွင်းဆက်ပေးလိမ့်မည် Lego ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် VIP အသင်းဝင်ဖြစ်ရမည်။ ဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုရွေးရန်အချိန်များစွာရှိသော်လည်းများစွာသောသူတို့နှင့်ပါ အသစ်အစုံ ရရှိနိုင်ပါအဘယ်ကြောင့် start ဖြစ်နိုင်သမျှ VIP အချက်များအပေါ်သိုလှောင်?
← Lego အသစ် Speed Champions အစုံ LEGO.com ပေါ်တွင်ဖြန့်ချိပါပြီ
တရားဝင်ပုံများ LEGO အဘို့အပြောက် Star Wars 75296: Darth Vader တရားရှုမှတ်ခြင်းအခန်း →